Afhayeenka midowga musharaxiinta oo shir jaraa'id qabtay | KEYDMEDIA ONLINE
Afhayeenka midowga musharaxiinta oo shir jaraa’id qabtay
Afhayeenka midowga musharaxiinta madaxweynaha Soomaaliya 2021 Danjire Daahir Geelle ayaa goor dhaw shir jaraa'id ku qabtay Hotel Jazeera isagoo ka wakiila Golaha Midowga Musharaxiinta Madaxweyneha.
MUQDISHO, Soomaaliya - Danjire Daahir Geelle oo ah Musharax madaxweyne islamarkaana ku hadlay afka Golaha ay ku mideysan yihiin midowga musharaxiinta madaxweynaha Soomaaliya ayaa daqiiqado kahor ku qabtay shir jaraa'id hotel Jazeera ee magaalada Muqdisho, xilli ay sare usii socoto arrimaha muranka badan ee doorashooyinka la xiriira.
Daahir Geelle oo ka hadlaya xaaladda uu maanta dalka marayo ayaa si aada khudbadiisa ugula dardaarmay madaxweynaha waqtigiisu dhammaaday ee Farmaajo, waxa uuna udiray dhowr farriimood oo is-daba joog ah kuwaasoo ku aaddan xukun jaceylka iyo muddo kororsiga maanta lagu hungoobay ee Golaha Shacabka inta la hor geeyay socon weysay.
Daahir Geelle ayaa isagoo ka hadlaya Farmaajo wuxuu yiri "Madaxweyne Farmaajo Sanduuq dhalo ah ayaa lagu doortay balse isagu ma rabo in Sanduuq dhalo ah lagula tartamo, waxaa uu rabaa in uu xukunku ku joogo Qori caaradiisa wax soconayana ma ahan".
Mar kale isagoo ka hadlayay dhaqamada la bartay afartii sano ee uu meesha fadhiyay Farmaajo waxa uu yiri "Xildhibaanada ayagoo lacag qaadan ayey Villa Soomaliya ka ra'yi duwanan karaan, waana dhaqan xun oo 4-tii sanno lasoo dhaafay ay na bareen qolada xukunka dalka heysay in dadka ka fikirka duwan la caayo".
Musharaxa ayaa ku eedeeyay madaxweynaha waqtigiisu dhammaadey ee Farmaajo in uu amray guddoonka Golaha Shacabka in ay muddo kororsi u sameeyaan, wuxuuna ku booriyey in uu dalka ku hogaamiyo doorasho daahfuran.